Ny fizahana ny Semalta Torolàlana hanakanana sy hanalàna ny Google Analytics Spam
Tsy olana vaovao ny spam analitika, fa vao haingana dia lasa mampidi-doza kokoa noho ny hatramin'izay. Eto ny manam-pahaizana manerantany avy amin'ny Semalt , Lisa Mitchell, dia hanazava ny fomba sasany hanakanana sy hanesorana ny spam Google Analytics. Azonao atao koa ny mizara ny fiantraikan'izany eo amin'ny toerana misy anao - garage wardrobe storage.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ity spam-fanadihadiana ity dia tonga amin'ny endrika samihafa: spam ghost sy spam bot. Samy manana fiantraikany amin'ny Google Analytics ireo endrika roa ireo. Noho izany, ny fomba tokony hiatrehana azy ireo dia tokony ho hafa, ary tokony hifantoka amin'ny fomba hanesorana azy amin'ny ankapobeny ny lohahevitra.
Inona no atao hoe Bot-Spam?
Ny fifamoivoizana Bot na Bot Spam dia mahazatra sy mampidi-doza kokoa noho izay mbola tsy andrasanao. Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay dia nahitana tranonkala maherin'ny roa arivo tapitrisa noho ny tsy fahampian'ny fifamoivoizana. Tsy ny boka rehetra akory no mampidi-doza na ratsy. Google, Bing, ary ireo karazana fikarohana hafa mifototra amin'ny boka amin'ny fikarohana raha mikaroka sy mandrisika ny votoaty ao amin'ny tranonkala. Ireo mpikirakira ara-barotra toy ny SEMrush, Pinterest, ireo mpamatsy sakafo toy ny FeedBurner, Twitter, ary koa ny fanaraha-maso ny botsaka toy ny WordPress, Uptime Robot, dia tsara ny miaraka. Saingy tokony hanao izay tsara indrindra vitanao ianao mba hialana amin'ny boban-java-manahirana izay manimba ny tranokalanao amin'ny ankapobeny.
Spam bots na spam crawler dia ny programa natao hamolavolana ny asa samihafa, toy ny fangalarana ny votoatiny sy ny data, ny server server, ny spamming fanehoan-kevitra, ny fanafihana phishing, ary ny fanafihan'ny DDoS. Ny sokajy faharoa dia ny fitaovana hacking, izay ampiasaina amin'ny famoahana azy io, dia ampiasaina mba hampiasana ny fanafihana DDoS. Ny roa amin'ireo taona lasa izay dia nanambara i Google fa tranokely 200 isan-jato no nakarina noho io olana io. fampiasana botsaka hanaparitaka votoaty fanentanana amin'ny endriky ny rohy phishing sy fanehoan-kevitra.
Misy fomba maro samihafa hanakanana sy hanesorana bots ary spam. Ny sasany amin'izy ireo dia nodinihina etsy ambany.
Fefilana automatique (Botter automatique) / Spider
Io endri-javatra io dia nampidirin'i Google volana vitsy lasa izay. Azonao atao ny manamarina sy manakana ny fifamoivoizana avy amin'ny adiresy IP tsy fantatra. Azonao mora foana ny manala ireo spiders sy bots amin'ny karazana ity. Azonao atao ny manangana filtre amin'ny lisitry ny Spider IAF / ABC International Spiders & Bots. Ny auto-filters no fiarovana matanjaka indrindra amin'ny bot spam satria maro ireo tranonkala no efa nandray soa avy tamin'izany. Mora ny mampihatra ary manome vokatra tsara ho anao.
Fandefasana botsaka mampiasa .htaccess
Ny fomba iray hafa dia ny manakana bots amin'ny fampiasana rakitra .htaccess. Ity endri-tsarin'ny sivana ity dia manampy amin'ny fanesorana ireo botsikao mitsidika ny Google Analytics. Manakana ny fahatongavan'ireo bota izany, saingy tsy mety ho vahaolana maharitra ho an'ny tranonkalanao izany. Raha misy fisafotofotoana na fanontaniana momba ireo vahaolana omena eto dia azonao atao ny mifandray aminay amin'ny alalan'ny tsinjara eto ambany.